mi recovery အကြောင်း သိကောင်းစရာနဲ့ custom recovery အကြောင်း တစေ့တစောင်း « XMS-MMF
Clone or Branded?
child mode redminote3
custom developer rom....
gapps for mi 5
google app for mi
google app for redminote 3
google for xiaomi
Redmi Note 4G (International/China)
mi recovery အကြောင်း သိကောင်းစရာနဲ့ custom recovery အကြောင်း တစေ့တစောင်း
Mi recovery system...
Mi က သူ့ရဲ့ဖုန်းတွေ recovery အတွက် recovery ၂မျိုး အသုံးပြုထားပါတယ်... ဘာတွေလဲ... ဘယ်ဖုန်းမှာ ဘာသုံးလဲ ဒါကလဲ သိသင့်ပါတယ်......
Mi3w/c Mi4 w/c တွေမှာ အသုံးပြုတာက mi recovery version 2.0.1 အသုံးပြုထားပါတယ်... အသုံးပြုရတာ လွယ်တယ်.... ခက်တာက external sd card ကဟာကို recovery ကနေ flash လို့ မရဘဲ sd card ထဲမှာပဲ update.zip လို့ ဖိုင်နာမည်ပြောင်းပီး install update.zip from sdcard ဆိုပီး သုံးလို့ရတယ်..... စစချင်း ဘာနဲ့ recovery mode သွားမလဲ...
1.Updater>reboot to recovery mode
(အပေါ်အောက် ဆင်းဖို့ အသံအတိုးအကျယ် ခလုတ်သုံးပီး enter အတွက် power ခလုတ်ကို သုံးသည်)
အရင်ဆုံး ပေါ်လာရင် တရုတ်စာ နှစ်ကြောင်းနဲ့ အဂ်လိပ်တကြောင်း..... အင်္ဂလိပ်ကိုရွေး..... အထဲရောက်ရင် reboot now, wipe, install update.zip from sdcard, back main menu.... စသဖြင့် ကိုယ်အသုံး ပြုလိုတာကို ရွေးပီး သွားနိုင်ပါတယ်......
Wipe ထဲမှာ.... wipe cache, wipe user data, wipe all data..... 3ခု ရှိပါတယ်... တော်ရုံတန်ရုံ သေးသေးလေး ပြသနာ အဲဒါနဲ့ရှင်းကြည့်... နဲနဲလေး တိုင်ပတ်တာ များရင် wipe user data..... အနော့်ဖုန်းတော့ လိုဂိုကနေ မတက်တော့ဘူး.... wipe all data လုပ်ပေးလိုက်..... wipe ကိစ္စပီးတော့ ဘာဆက်လုပ်ရအုံးမလဲဆိုတော့ reboot now လေး နှိပ်ပီး ပြန်သွားလို့ရပီ....
# အားသာချက် အသုံးပြုလွယ်
အားနည်းချက် wipe all data လုပ်ရင် apps အားလုံးပျက်ကုန်......#
Cwm or twrp recovery သုံးချင်ရင်တော့ custom တင်လို့ရတယ်.... stabel verion မြှင့်လိုက်တိုင်း ပြန်တင်ပေးရမယ်... dev version မြှင့်ရင် ထပ်တင်စရာမလို.....
Note 3g တွေမှာပဲ သုံးတယ်.... အားသာချက်က external memory card က zip ဖိုင်တွေကို flash လို့ရတယ်... သူကို ၀င်ပုံက အပေါ်နဲ့ ဆင်တူတယ်... ကွဲတာက recovery ထဲရောက်ပီးမှ choose ကို volum down key နဲ့ လုပ်ပီး enter က volum up ပါ......
# အားသာချက်... external sd card ထဲက ဖိုင်များကို flash လုပ်လို့ရ... wipe all data လုပ်လဲ apps မပျက်.. backup & restore လုပ်လို့လဲရ……
အားနည်းချက် recovery mode ကို ၀င်ဝင်ချင်း no command ဆိုပီးပဲ ပေါ်နေတယ်… တစ်ခုခုဖြစ်ပီလားဆိုပီး စိုးရိမ်တတ်ကြတယ် power ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးလိုက်မှ menu စာတမ်းလေးတွေ ပေါ်လာမယ် သက်ဆိုင်ရာကို ၀င်ပီး ကလိနိုင်ပါပီ…..
ဒီလောက်ကတော့ ကျွန်တော်သိသမျှ အကုန်ဆိုပါတော့.... ထပ်မံဖြည်းသွင်းစရာလေးများ ရှိပါက ဖြည့်ပေးကြပါ….
custom recovery systems…….
cwm recovery for note 3g
u need to install mobile uncle tool on ur device first….
mobile uncle tool… http://www.mediafire.com/download/9g4si340gd2muua
custom recovery…. http://www.mediafire.com/download/lzv6s705q40ko3d
stock recovery… http://www.mediafire.com/download/lu0z5lob90lz6rz
twrp recovery for mi3/mi4
Cwm philz recovery for mi note 4g
cwm recovery for redmi2
updater ကနေ တိုက်ရိုက်တင်လို့ရပါတယ်..... updater ကနေ ဘယ်လိုဝင်ရမယ် ဆိုတာတော့ ပြောထားတာတွေ အများကြီးရှိခဲ့ တဲ့အတွက် ထပ်မရှင်းပြတော့ဘူးနော်…..
updater ကနေ တင်လို့မရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ သွင်းချင်တဲ့ recovery file ကို update.zip လို့ပေးပီး internal storage ထဲကို ဘယ်ဖိုဒါမှ မထားဘဲ အပြင်မှာထားပါ ပီးရင် ဖုန်းကို power off လိုက်ပါ… ပီးရင် power+volume up အတူတူဖိထားလိုက်ရင် mi recovery ပေါ်လာမယ် အဲဒီ့ကနေမှတဆင့် install update.zip from sd card ကိုရွေးပီး အိုကေပေးလိုက်ရင် အင်စတော လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်… note 3g သမားတွေကတော့ power+volume down ပါ
About Myanmar Mi Fan
xiaomi နှင့်ပတ်သက်သော Tutorial Post များအား လေ့လာသူများ တစ်နေရာတည်းတွင် အချိန်ကုန်သက်သာစွာရှာဖွေ Download လုပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ပညာရှင်များစွာ၏ post များအားစုစည်းဖော်ပြထားသော Blog ဖြစ်ပါသည်။ ပြု ပြင်ဆဲ ကာလ ဖြစ်သည့်အတွက် အခက်အခဲများ ၊ လင့် တချို့ အလုပ်မလုပ်ခြင်းများ ရှိပါသည်။ xiaomi Myanmar Admin Team ! Google+.
Complete the form below, and we'll send you the best coupons.
Facebook သို့ စာပို့ရန် နှိပ်ပါ။
Xiaomi Myanmar Service - XMS
MM font for all xiaomi devices (no need root)
Smartzawgyi Pro theme ကို Theme ထဲမှာရှာမတွေ့သူ Download လုပ်ပြီး Apply လုပ်မရသူတွေအတွက် Rename ပြောင်းပြီးသား Smartzawgyi Pro theme fo...
MI Devices Fastboot Firmware Flashing Guide !
ကဲ........ Xiaomi Devices တွေထဲကမှ " MI Phone " တွေက အခုနောက်ပိုင်း လူကြိုက်များလာတာနဲ့ အမျှ အသုံးပြုသူတွေ ကလိတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ...
MIUI Myanmar Theme Font
https://my.pcloud.com/ publink/show?code=Qbl miui rom တေအတွက် font မရှိသေးလို့ သွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ချိန်းသုံးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေသလိ...
MIUI 8 6.6.17 မြန်မာ ဇော်ဂျီ ထည့်သွင်းနည်း 100%
MIUI 8 Beta ROM 6.6.17 အတွက် မြန်မာ Zawgyi Font သွင်းနည်းလေးမျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ဒီနည်းလေးကတော့ Root Explorer အသုံးပြုပြီး...
Xiaomi အရောင်းနှင့် Service ဆိုင် များ
Myanmar Mi Store လိပ်စာ အမှတ် ၄၂၄၊ ဗညားဒလမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ (သျှင်ပါကူဆေးရုံနဲ့ မျက်စောင်းထိုး) Win mobile ၄၆-၄၈ မြေညီထ...
© 2015 XMS-MMF. Powered by PhoneHayKo - XMS.